Mai Chibwe VekwaZimuto: Mudyandigere
Munhu kuti ahi nimudyandigere anenge ari munhu asingashandi zvokuuisa mari kumba. munhu agere zvake pamusha akamirira kusapotiwa nomurume/mukadzi wake. kubva kare naare isu vakadzi tisu taiva vana Mudyandigere asi mazuvanounoona kuti kune varume vava kuzviitawo izvi, zvikuru muDiaspora.
Mukadzi munhu ane mabasa akawanda pamusha. Murume achitora mukadzi anoona kuti nguva yokuvaka mhuri yaanoti ndeyake yakwana saka odawo kuita vana vake. anonotsvaka musikana waanoda oroora vese vobva vatanga kugara vese vachironga upenyu hwavo vakadaro. Mukadzichero ari mushandi, pane nguva dzakawanda dzaanombogara pamusha asingaendi kubasa. Zvikuru kana azvara mwana. Kune nyika dzakaita se UK dzinopawo murume mazuva okugara pamba kana mwana azvagwa asimuchaona kuti anopiwa vhiki mbiri chete mukadzi achipiwa nguva yakareba. Izvi zvinoitwa nokutimukadzi anofanira kumwisa mwana, kuvaka muvirii wake uya wagadzira mwana nokumuzvara, uye kuita zvimwe zvese zvinodiwa kuitwa mazuva ese.
Mukadzi ane vana kurikare ainzi agare pamba achirera vana vake. Zvokushanda zvange zviri zvemurume chete. Mazuvano nyaya dzawandisa saka rufu gwazadza nyka yese, iri nyaya yechihure chongoti vanhu vese vane mhurinevasina vava kungohura. Kare murume aikwanisa kusiya mukadzikumusha iye achishanda kudhorobha ega asi asingahuri, mukadziwo achisara asingahuri. Mazuvano kungoparadzana kwezuva rimwe chete, unohwa zvohi murume akaonekwa and joki mumota, mukadziwo akawonekwa ane chikomba. Vana vanozvagwa mazuvano kana usina kuvaendesa kutest hauzivi kuti baba vavo ndevapi. Iyewo murume anoendesa vana vazvagwa mumba make kutest ane vamwe vana vari kureriwa noumwe murume kune umwe musha. Yangove nyaya yokurera vana vazvarigwa mumusha wako. Kana usina mari yokunotesitisa vana, haumbofi wakaziva kuti havasi vako kana kuto vaya vazvagwa nemahure ako ndevako.
Zvakadai tinoona vakawanda vachifa nguva isina kukwana. Zvinoreva kutimukadzi haachakwanisi kuita mudyandigere. Ava munhu asina nguva yakakwana muupenyu. Kana akada kuita mudyandigere anofa kana kufigwa nomurume vana vasina kupedza chikoro. Zvozodii?
Vanhu tese hatidi kufunga nenyaya dzorufu asi kana une maziso uchaona kuti vanhu vari kutofa zvakawandisa. Iwe nomurume wako hapana zvinokuraramisai kupfuura vamwe. Kana ukafa kana kuti murume wako akafa, vana ngavawane chokuvachengeta nacho.
Kugdzirisa nyaya iyi ngatibvumirane kutii mukadzi ane vana anofanira kushanda achiunza mari kumba. Kana waroogwa usingashandi, wana mukana wekuunza mari mumba. Shanda kana kuzvishandira uchiwana zvinhu zvokuchengeta vana nazvo.
Chimwewo chinhu ndechokuti mwana achikura anofanira kukudzidziswa zvinhu zvakakosha muupenyu. Mwana akaona mubereki achishanda, anokoshesa kushanda okura achiziva kuti kushanda chinhu chakanaka.
Kubva kare murume haadyi agere.Vanhu vanooseka murume anosara kumba achiita mabasa emumba muadzi achienda kubasa. Vakadziwo vanoona sokuti ndiye ava samusha kana achishanda murume asingashandi. Unozoonazve kuti murume anoruza confidence otanga kuita zvisina mature. Pane umwe anogara pedo nesu akazoti mukadzi obva kunight shift ndokuwana murume avete nehure mumba, Votukana akaudza mukadzi kuti zvokuvata ega vhiki yese haazvikwaisi. Ipapomukadzi aishanda 72 hours per week, odzoka kumba ovata murume amuka. Varume hhavagoni kudyavagere.
Asizve kune vamwe varume vanoti uku hapana masa emumba aanogona, uku haashandi. Mukadzi anomuka oenda kubasa, odzoka oitazve mabasa emumba murume aswera akangogara mumba kana kuti aenda kunomwa doro neshamwari dzake. Ukaona wadanana nomurume akadai chikasira kumusiya utsvake umwe, zvikuru muno mu Diaspora. Mabasa mu UK ariko asi kungoti pamwe anenge asiri mabasa akakodzera.Ukaona murume asingashandi ziva kuti haadi kushanda. Ukaita vana naye watozvipinza pakaoma.
Asizve kunowanikwa murume anoda kushanda, aitomboshanda, ndokuzomiswa nenyaya yokushhaikwa kwemapepa munyika yauri. Haisi mhoswa yake kana mapepa achinonoka kubuda. Asi iyewo ngaachifanobatsira mukadzi anoshanda pakuita mabasa emumba pane kuswera munhu akagara mabasa asina waita.
Murume asingashandi ane nguva yokuswerofunga zvaanoda kuita nomukadzi kana mukadzi adzoka kubasa. Hazziiti kuti mukadzii adzoka kubasa akaneta osvikoita mabasa emumba, ozodazve kuita mabasa emumba yokuvata. Kana adzoka kubasa mupewo zvokudya agere pasi. Wonomukwiza mubhavhu paanogeza womukurudzira kukasira kunovata momboitawo nguva yenyu pamwe chete.
Kune vakadzi vasina njere. Kana wakaroorana nomukadzi akadai unnona kuti kana usingashandi anokutsoropodza agokurambidza kuvata naye, agokuitisa sechimwana chidiki. Agotaurira shamwari dzakonehama dzako kuti hapana zvauri, haugoni chinokana chino. Paunozowana basa unenge usisiri murume anohi samusha. Kuzoda kudzokerana pamange muri kare zvinozokunetsai cheromari yavapo pamusha.
Munyika dzisina mabasa:
Munokwanisa kuenda munyika isiri yenyu mosvikowana nyika iyi ine rusaruraganda zvokuti murume/mukadzi anokwanisa kushaya basa asi ari munhu akadzidzira mabasa akawanda. Sokuti uri Dhokotera, unokwanisa kunyimwa basa rawakadzidzira. Fanoshanda basa rinowanikwa uchiriritira mhuri yako uku uchitsvaka basa rako nokuwedzera kudzidza.
Kugara mumba usina chauri kuita kunobvisa rukudzo uye kunokuitisai kuti mupopotedzane mumba. Musha wakanaka hauna bopoto. Vanhu shandai murere mhuri dzenyu. Zvokuti murume/mukadzi anotambira mari yakawanda saka iwe woda zvokugara mumba hazviiti mazuvano.
Unokwanisa kugra mumba uchifunga kuti zvokushanda hazvina basa, wotadza kuverenga nokutsvaka basa. Kozti nguva yafamba murume/mukadzi wako okuudza kuti haachisina rudo newe. Uchazodii pakadaro. Unowanepi umwe akaita saiyeye iwe wava munhu akura? Munhu gara wakagadzirira upenyu uri munhu akakwana pane zvaanoda kuti ararame. Kana uchiwana promotion kana kukudza bhizimisi rako ita izvozvii uchine ENERGY yakakwana.
Murume/mukadzi anokuudza kuti usashanda munhu anokuudza nhema. Munhu asingadi kuti utarise upenyu sezvahuri. Munhu asingatarisiri mberi as anotarisa zvanhasi ofunga kutii upenyu hwenyu huchangogara hwakadaro kusvika vana vakura mave nevazukuru. Munhu akadai haazivi upenyu. Gara naye pasi muronge.
Munhu anokurambidza kudzidza kana kukunyima nguva yokudzidza munhu asingakudi, uye asingadi vana vako. Munhu anoziva upenyu anogadzirira upenyu.
Ikaona hama yako kana shamwari yako ichitsvaka basa zama kumubatsira awane basa nokuti kumba kwake kune nhamo inoda awane basa. Kana tese muraini tikashanda, raini redu rinova revanhu vanobudirira. Nhasi iwe une basa. Mangwana unokwanisa kunge usina basa. ndiani achakubatsira kuriwana.
Murume wako kana asingashandi murume wako chete anopiwa abasa evarume apamusha
Mukadzi wako kana asingashandi mukadzi wako chete anopiwa mabasa evakadzi apamusha.
Ngatisaputsa dzimba dzedu nenyaya yokuti umwe haashandi. Asizve iwe zvokudya ugere mabasa ariko siyana nazvo.
Posted by Mai E Chibwe at 05:57